OMN: Oduu Amma Nu Gahe Mud 3, 2015/Breaking News - OMN
OMN: Oduu Amma Nu Gahe Mud 3, 2015/Breaking News
Mormii Maaster pilaanii Finfinnee irratti, guutummaa Oromiyaa keessatti eegalamee ture, cimninnaan itti fufee wayta jiru kanatti, ajjeechaan barattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru daran hammateera.
Haaluma kanaan godina shawaa kibba lixaa aanaa Tolee magaalaa Baantuutti hiriira mormii gaggeeffameen, barataan kutaa 10ffaa Dajanee Sarbeessaa, rasaasaan ajjeefamuusaa barattoonni OMNtti himan.
Haaluma walfakkaatuun barataan biraa godina Wallaga lixaa anaa Gullisoo magaalaa Calliyaatti barataan Karrasaa Caalaa jedhamu, kaleessa rasaasaan dhahamee waldhaanamaa kan ture ta’ullee, har’a ganama garuu lubbuunsaa dabrtee jirti.
Dhukaasa Gullisootti barattoota Oromoo irratti banameen, Barataan Guutuu Abarraa jedhamu kaleessa ajjeefamuu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamudha.
Godina Shawaa kibba lixaa aanaa Tolee Magaalaa Baantuutti, reeffi barataa ajjeefamee, konkolaataa polisoota feedaralaatti fe’amee gara Finfinneetti geeffamuun isaa beekamee jira.
Wayta ammaa magaalaan Baantuu dirree waraanaa fakkatti jedhameera.
Baha Oromiyaatti ammoo, guyyaa har’aa barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa Haramayaa fi, jiraattonni magaalatti hiriira bahuun mormii isaanii dhageessisaa oolanii jiran.
Achuma Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti barattonni hiriira mormii geggeessaniin poolisoonni Oromiyaa barattoota bittinsuu isaanii himame.
Erga barattoonni addaa bittinfamanii booda, poolisoonni Fedralaa hedduumminnaan magaalattii weeraruun beekamee jira.
Magaalaa Baddannottis barattoonni mana barumsaa Sadarkaa lammaffaa hiriira mormii bahutti aansee, humnootiin poolisi addaan bitteennessuu fi ummata magaalatti sochii dhoorgaa jiraachun gabaasni nu gahe ni mul’isa.
Barattoonni Yunivarsitii Dirree Dawaa ammoo ganama kana hiriiraaf yeroo bahaa jiranitti, poolisoonni federaalaa moraa cabsanii seenuun, haleellaa hamaa irraan gahuu barattoonni OMNitti himanii jiran.
OMN: Oduu Mud. 2, 2015
OMN: Oduu Amma Nu Dhaqabee Mud. 3, 2015